Ifayibha Optical eyongezwayo Abavelisi | China Ifayibha yeZinto zeFibre ezibonakalayo kunye nabaxhasi
I-CWDM ye-Optical Power Meter
I-CWDM Optical Power Meter sisixhobo esinamandla kwezona zicelo zinzima ezifana nesantya esiphakamileyo semfundo yenethiwekhi ye-CWDM.Ngaphezulu kwama-40 amaza amaza, kubandakanya onke amaza e-CWDM, avumela ubude bomgama obuchaziweyo bomsebenzisi, usebenzisa indlela yokuguqula phakathi kokulinganiswa amanqaku. Sebenzisa umsebenzi wayo we-Hold Min / Max Power ukulinganisa inkqubo yokuqhuma kwamandla okanye ukuhla kwamandla.
Imitha yamandla ombane ephathekayo yimitha echanekileyo nehlala ixesha elide eyenzelwe ufakelo, ukusebenza kunye nokugcinwa kwenethiwekhi yefayibha ebonakalayo. Isixhobo esihambelanayo nesitshintshi sokukhanyisa ngasemva kunye namandla emoto ekucimeni. Ngaphandle koko, inika uluhlu lomlinganiso obanzi, ukuchaneka okuphezulu, umsebenzi wokuzilinganisela womsebenzisi kunye nezibuko lendawo yonke. Ukongeza, ibonisa izalathi zomgama (mW) kunye nezalathi ezingezizo ezomda (dBm) kwiscreen esinye ngaxeshanye.
Amandla ePON Optical
Amandla oMbane oMbane oPhezulu oPhezulu, i-JW3213 PON Optical Power Meter iyakwazi ukuvavanya ngaxeshanye kunye nokuqikelela imiqondiso yelizwi, idatha kunye nevidiyo.
Sisixhobo esibalulekileyo nesifanelekileyo sokwakha kunye nokugcina iiprojekthi ze-PON.
Ibhokisi yeABS PLC Splitter
Imowudi yendlela enye yokuKhanya kwesibane seSetyhula Splitter (i-PLCS) iphuhlisiwe ngokusekwe kwinkqubo ekhethekileyo yeglasi yesilica yokuhamba ngokuchaneka ngokuthembekileyo kokuhambelana nefayibha yehagu kwiphakheji ye-minia-ture, ibonelela ngesisombululo sokuhambisa ukukhanya esinexabiso eliphantsi kunye nefom encinci kunye nokuthembeka okuphezulu. Izixhobo ze-PLCS zinokusebenza okuphezulu malunga nelahleko esezantsi yokufaka, iPDL esezantsi, ukulahleka okuphezulu kokubuya kunye nokufana okugqwesileyo kububanzi obude be-wave ukusuka ku-1260nm ukuya ku-1620nm kunye nokusebenza kubushushu ukusuka -40 ukuya ku-85. Izixhobo zePLCS zinokuqwalaselwa okumiselweyo kwe-1 * 4, 1 * 8, 1 * 16, 1 * 32, 1 * 64, 2 * 2, 2 * 4, 2 * 8, 2 * 16 kunye 2 * 32.
Icwecwe kunye nobunzima bokuKhanya
Ifake isicelo seFibers, iiNtambo kunye ne-SOC (splice- kwisinxibelelanisi)
Uyilo oluHlanganisiweyo lokuBamba
Oluzenzekelayo ngokupheleleyo, Semi-oluzenzekelayo Operation Manual
Ukutshutshiswa, ukuyeka ukuxhathisa
Umsebenzi wokonga amandla
4.3 intshi Umbala LCD esweni
Optical Fusion Fusion Splicer
Umqondiso woMlilo we-AI-7C / 7V / 8C / 9 sebenzisa itekhnoloji yokulungelelanisa engundoqo ngokugxila kwi-auto kunye nee-Motors ezintandathu, sisizukulwana esitsha sefayibha fusion splicer. Ifaneleke ngokupheleleyo ngokwakhiwa kwe-trunk eyi-100 km, iprojekthi ye-FTTH, ukubeka iliso kukhuseleko kunye nezinye iiprojekthi zokufaka intambo yefayibha. Lo matshini usebenzisa i-CPU ye-quad-core yemizi-mveliso, impendulo ekhawulezileyo, kungoku nje ngomatshini wokukrola ifayibha okhawulezayo kwimarike; kunye ne-5-intshi 800X480 yesisombululo esiphakamileyo, umsebenzi ulula kwaye unomdla; kwaye ukuya kumaxesha angama-300 kugxilwe kukhuliso, okwenza kube lula kakhulu ukugcina ifayibha ngamehlo ze. Imizuzwana eyi-6 isantya sokulungelelaniswa kwesiseko sokulinganisa, imizuzwana eyi-15 ukufudumeza, ukusebenza ngokukuko kunyuke nge-50% xa kuthelekiswa noomatshini abaqhelekileyo bokucoca.
FTTH Cable yangaphandle
Intambo yokulahla ngaphandle ye-FTTH (GJYXFCH / GJYXCH) ikwabizwa ngokuba yi-butterfly yokulahla intambo enombala ngentambo yebhabhathane yangaphakathi kunye nelungu elongezelelekileyo lamalungu e-1-12 fiber cores. Ibhabhathane elahla intambo ebonakalayo enentambo yebhabhathane yangaphakathi kunye nelungu elomeleleyo kumacala omabini. Inani lefayibha linokuba zii-1-12 ze-fiber cores.
Ikheyibhile ye-FTTH yangaphakathi
Intambo ye-FTTH yokulahla ngokufikelela ngokulula kwifayibha kunye nofakelo olulula, intambo ye-FTTH inokunxibelelana ngqo namakhaya.
Ilungele ukunxibelelana nezixhobo zonxibelelwano, kwaye isetyenziswe njengentambo yokwakha yokufikelela kwinkqubo yokuhambisa indawo. Iintsinga zamehlo zibekwe embindini kwaye amalungu amabini afanayo eFiber Reinforce Plastic (FRP) abekwe kumacala omabini. Ekugqibeleni, intambo igqityiwe nge-LSZH sheath.
Sibonelela zonke iintlobo zefayibha optic patch intambo yokuqhagamshela kunye ne-EPON / GPON ONUs.
Intambo yepatch yintambo ye-fiber optic esetyenziselwa ukufakela isixhobo esinye kwenye ukuhambisa umqondiso.
I-SC imele isinxibelelanisi sombhalisi- injongo yesiqhelo yokutyhala / yokutsala isitayile. Sisikwere, snap-in isinxibelelanisi se-latches eshukumayo esilula sokutsala kunye nesitshixo.
Ibhokisi yokuhanjiswa kweFiber Optical
Ukuvalwa oxwesileyo zibonelela isithuba kunye nokhuseleko ifayibha optic intambo usifake kunye ngokudibeneyo. Banokuxhonywa emoyeni, bangcwatywe, okanye ngenxa yezicelo zangaphantsi komhlaba. Ziyilelwe ukuba zingangeni manzi kunye nothuli. Zingasetyenziswa kubushushu obuqala -40 ° C ukuya kuma-85 ° C, zinokufumana uxinzelelo lwe-kpa ezingama-70 ukuya kwi-106 kwaye imeko zihlala zenziwe ngeplastiki yokwakha eqine kakhulu.
Uluhlu lwebhokisi yokuhanjiswa kweFiber Optic yenzelwe ngokukodwa ukusetyenziswa ngaphakathi kweFayibha ukuya kwiKhaya (FTTH) yeeNethiwekhi zoMsebenzi eziPhawulayo (PON).
Ibhokisi yeFayibha yokuHanjiswa luhlobo lwemveliso yecompact, udonga okanye ipali enokufakwa kwifayibha evaliweyo yokusetyenziswa ngaphakathi nangaphandle. Ziyilelwe ukuba zisasazwe kwindawo yomda wenethiwekhi yefayibha ukubonelela ngonxibelelwano olulula lwabathengi. Ngokudityaniswa neenyawo ezahlukeneyo zeadaptha kunye neziqhekezi, le nkqubo inikezela ngokuguqukayo kokugqibela.
Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle, Umthumeli weXfp, Imodyuli yeFiber Optical, IHuawei Qsfp +, Ixabiso leHuawei Olt, I-Sfp C ++,